Mootummaan Seera kamiin Interneeta Cufuu danda'a? - BBC Ahmaric irraa fudhanne | oroict.com Solutions
Mootummaan Seera kamiin Interneeta Cufuu danda'a? - BBC Ahmaric irraa fudhanne | oroict.com Solutions oroict.com Solutions
Post in Leenjii fi Gorsa TQO, Marsaalee Ammee, Marsaalee Hawaasaa, Tajaajila Telekoomii
Mootummaan Seera kamiin Interneeta Cufuu danda’a? – BBC Ahmaric irraa fudhanne
MM Dr.Abiy, Torbaan darbe Ibsa Gaazexeessitootaaf yemmuu kennan Gaffii Gaazexeessitootarraa dheyaateef keessaa tokko, Gaaffii Cufamuu INTERNEETAA ture.
Muummuchi deebii yoo deebisan akka jedhanitti ‘ Lubbuu Lammiileefi Qabeenya biyyattii oolchuu barbaachisaa ta’ee yoo argame Torbaan qofa osoo hin taane guutumatti cufuu ni danda’ama’ yoo jedhan dhageenyeerra. Haatahuu malee, mootummaan seera kamiin Interneeta cufa?
Ogeessi Seeraa Obbo Misgaanaa Mulugeetaa: Akka Murtee seera Mirga dhala namaafi Heera Biyya keenyatti Mootummaan nageenya biyyattii eeguuf tarkaanfii akkasii fudhachuu danda’a jedhu.
Gaaffii walfakkaatuuf; Barreessaan Kitaaba ‘ Girimta SyTech’ fi Addunyaa irraa Matseetii Fortune irratti galii olaanaa kan galchan Fortune500 keessaa Hoogganaa Tekinoolojii kan ta’e Obbo Salamoon Kaasaa gama isaaniitiin: MM aangoo irra erga taa’aniifi Nageenya lammiilee kabachisiisuuf ittigaafatmummaa kan qaban ta’uusaaniitiin; Oduuwwan Feesbuukiin tamsa’an rakkoo isaan qaqqabsiisuu danda’an xiyyeeffannoo kennanii ilaaluun isaanii kan eegamuudha jedhu.
Mootummootni Maaliif Interneeta cufu?
Biyya keenyatti Mootummaan irra deddeeiidhaan Iterneeta cufuun odeeffannoowwan adda addaa akka bilisaan hin tamsaaneef seeraan ala kan dhimma itti bahameedha jedhu Ogeessi Seeraa Obbo Misgaanaa Mulugeetaa.
Dabalataanis, Biyyoota addunyaa adda addaatis Mootummootni Interneeta kan cufan; Yaadni isaan mormu akka hin babnadhanneef tooftaa itti fayyadamaniidha jedhanii mormiin heddu dhagahama jedhu ogeessi seeraa.
Qopheessaafi Dhiyeessaan qophii ‘Tech Talk’ Obbo Salamoon kaasaa gama isaaniitiin; Interneeta addaan kutuun addunyaa irratti baramaa dhufaa jira jechuudhaan yaada ogeessa seeraa cimsu.
Sababni isaa maali? kan jedhuuf ammoo; Qorannooleen gaggeeffaman akka agarsiisanitti Mootummaan Odeeffannoolee siyaasaa too’achuuf ykn akka harkaa hin baaneef ykn laaqama siyaasa biyyattii gara ofii barbaade qofatti oofachuuf yoo barbaaduudha jedhu.
Mootummootni rakkoolee biyyattii keessatti mudate too’achuufi sirreessuudhaaf yoo jedhanis; Qorannoon kan agarsiisu Mootummootni haguuggii siyaasaatiif obsa akkasii dhimma itti bahu jedha Obbo Salamoon.
Dubbisi | Read Maloota Koompuutara keenya Boqochiisuuf Fayyadan: OROMO ICT
Interneetiin Sosochii Siyaasaatiif baldhinaan hojiirra kan oole bara 2010 ALA yeroo Goolama biyyoota Arabaa tahuu kan yaadatan Obbo Salamoon ‘Achiin booda Mootummootni Biyyoota adda addaa Interneeta xiyyeeffannoodhaan hordofaa jiru” jedhu.
Kanarratti Qorannooleen adeemsifaman eeruudhaan Goolama Biyyoota Arabaa booda biyyoota 40 oli keessatti yeroo 400 ol cufamuu akka ragaatti dhiyeessu Obbo Salamoon
Ogeessi Seeraa Obbo Misgaanaa Mulugeetaa gama isaaniitiin Yeroon Filannoo dhiyaachaa waan jiruuf akkasumas Gaaffii naannoo tahuu Ummata Sidaamaa yeroo ammaa deemaa jiru yaadachuudhaan ‘ Haala siyaasaa yeroo ammaa keessa jirrun haala danda’ameen Yaadotni haalaan tamsa’anii yaadotni falmisiisoon biroo itti dhiyaatee furmaata akka argatu gochuuf tooftaa fayyadamuu wayya.” jechuun yaada furmaataa biroo dhiyeessu.
Mataa Bowwuu Biyyoota Addunyaa
Odeeffannoowwan hedduu Walitti bu’iinsa kaasuu danda’an kanneen Feesbuukiin tamsa’an kan Biyya keenya Itoophiyaa qofa osoo hin taane Addunyaa guutuu fi Dhaabbatichuma Feesbuukiitiifuu Mataa bowwuu ta’aa dhufuu Obbo Salamoon ni dubbatu.
Rakkoon kun Gosa Afur:
Inni duraa Dafanii bananii ilaaluuf qalbii nama hatan hidhaa suuraawwan irratti hidhamuudha, Oduu Sobaa Namoota bebeekkamoo irratti oofamu, Akkasuma kanneen Jibbiinsa facaasan, Dhimma Siyaasaafi Walqunnamtii saalaa wajjiin walqabatee oduuwwan tamsa’an akka ta’e Ogeessi Tekinoolojii kun ni ibsu.
Barreeffamniifi suuraaleen jibbiinsa babaldhisan hedduu Feesbuukiirra akka tamsan kaasuudhaan ‘Odeeffannoowwan akkasii kun Walitti bu’iinsa yaadaa qofa osoo hin taane Walitti bu’iinsa qaamaatillee affeeruu danda’a’ jedhu.
Oduun sobaa ammoo Mataa dhukkubbii Addunyaa kanaa isa biraati, kan jedhan Ogeessi tekinoolojii Obbo Salamoon, Namootni hedduu haala salpjhaan akka dogoggoran gochuuf qindeeffamee kan dhiyaatuudha jechuun ibsu.
Inni biraa; Haasaa jibbiinsaati. Haasaan jibbiinsaallee Dhaabbata Feesbuukiifi Mootummoota Addunyaatiif Mataa dhukkubbii akka tahe kan ibsan Obbo Salamoon; Isaanis Sanyummaan, Saalaaf Amantii irratti kan fulleeffataniidha jedhu.
Dubbisi | Read Marsariitiiwwan Hootelaa hanga dhibbeentaa 66(66%) ta'an odeeffannoo Maamiloota isaanii qaama sadaffaaf ni dabarsu.
Siyaasa Itoophiyaan amma keessa jirtu sababeeffachuun: Sabaan, Amantiifi Saala irratti hundaayuun Haasaan jibbiinsaafi Odeeffannoon Sobaa babaldhatee akka muldhatu Ogeessi Seeraa Obbo Misgaanaa Mulugeetaa itti waliigalu.
INTERNEETA CUFUUN FURMAATA TA’AA?
Ogeessi Tekinoolojii Obbo Salamoon Kaasaa[Tech Talk TV Show on EBS) fi Ogeessi Seeraa Obbo Misgaanaa Mulugeetaa INTERNEETA CUFUUN Walitti bu’iinsa Sabaatis tahee Buqqa’iinsa Ummataa biyya keenyatti tahaa jiruuf furmaata hin ta’u jedhu.
Ogeessi Tekinoolojii Obbo Salamoon akka jedhanitti; Interneeta adda kutuu caalaa; Haasaa Jibbiinsaa Walitti bu’iinsa affeeranifi Odeeffannoowwan sobaa keessattuu kan gama FEESBUUKIItiin tamsa’u Dhaabbaticha dubbisutu sirriidha jedhu. Biyyoota kana godhan keessaa Jarmaniifi Filiphinsi akka Fakeenyaatti kaasu.
Mootummaan, Biyya Ummanni Mil.100 ol keessa jiraatu keessatti Walitti bu’iinsi yoo uumameefi taasgabbiin dhabamuun yoo itti fufe KISAARAAN biyya irra akka gahu dhaabbata Fessbuutiif yoo ibse; FEESBUUKII waliin Haasaa jibbiinsaa too’achuurratti xiyyeeffannoo kennee waliin hojjachuun ni danda’ama yaada jedhu kaasu.
Mootummaan Itoophiyaa Namoota Afaanota Adda addaa dubbatan dhiyeessee Feesbuukii waliin yoo hojjate bu’aan dhufuu danda’a, Tarkaanfii too’annoo fudhachuun ni danda’ama jechuudhaan gorsa isaanii jajjabeessu.
Ogeessi Seeraa Obbo Misgaanaa Mulugeetaa gama isaaniitiin Biyya keenyatti Interneeta cufuun akkuma fedhanitti jechuu: ‘Yeroo kaan Nageenya Ummataarratti balaa wanni geessu yoo uumame ni cufama, yeroo biraammoo Qormaata qoruuf cufama’ jechuun yaadannoo isaanii nuuf qoodaniiru.
Eenyu akka cufullee wanti beektu akka hin jirre eeruun ” Eenyutu cufa? Teeleedhaa? Muummicha Ministeeraatii? Moo Bakka Bu’oota Ummataati? jechuudhaan gaafatanii kan kana murteessu ifatti LABSIIN kaa’ame akka barbaachisu dubbatu. Mootummaan Nageenya biyyaafi Ummataa eeguun hojiisa jalqabaa waan ta’eef Yeroo isa barbaachisetti ka’ee INTERNEETA akka cufu yoo kan hayyamnuuf ta’e; Yoo seera cabse seerri ittiin too’annuun hin jiraatu jechuudhaan barbaachisummaa seeraa ibsu.
Dubbisi | Read Akkaataa #Mi'oota keenya(koompitara/Mobile/Tab..), Deetaafi Dookumantii, #Qabeenyaafi Odeeffannoo dhuunfaa keenya itti eeguuf nu fayyadu: Kutaa 2ffaa
INTERNEETA CUFUUN KISAARAA QAQQABSIISU
Obbo Misgaanaa, Dhiyoo Ethiotelecom ibsa baase irratti Sababa Intereetni cufameen Kisaaraa isa mudate ibsuu kaasanii; Miidhaa galii biyyattiirratti qabu agarsiisu.
Dhaabbatni biyya Ameerikaa jiru tokko qorannoo baaseen: Akka Interneetni cufamuun Biyya takkaa waggatti Karoora Guddina Galiiirratti giddugaleessaan kisaaraa dhibbeentaa 1.9 qaqqabsiisa kan jedhan Obbo Salamoon.
Dabalataan jedhu Obbo Salamoon; Biyyootni Deeggarsa MALLAQAA kennan Haalli Bulchiinsa Mootummaa qabatamaan Sababa cufamuu Interneetaatiif yoo ko’oomatu abdii kutatanii yaada jijjirachuu danda’u jechuun dhiibbaa inni qabu ibsu. Interneetiin kenniinsa Tajaajila Fayyaatiin kan walqabate ta’uu kaasuudhaan Cufamuun Interneetaa akka salphatti kan hin ilaalamne ta’uu akeekkachiisu.
Interneetni yoo cufamu;’ Itoophiyaan Maqaa yeroo ammaa kana Addunyaa irratti argachaa dhufte kan jalaa xureessuun miidhaa uumuun waan hin hafne’ kan jedhan obbo Salamoon; Walitti bu’iinsa too’achuuf jedhanii Interneeta yoo cufan Qaamoleen walitti bu’iinsa uuman Interneetni yoo cufamellee daandii biraa ni dhabuu? jedhanii gaafachuu akka barbaachisullee ni ibsu.
Ogeessi Seeraa Obbo Misgaanaa Mulugeetaan gama isaaniitiin Mirga Yaada bilisaan ibsachuu irratti dhiibbaan gahu haala salphaan kan bira hin dabarree akka tahe jalamuru.
Maddi: GABAABSA BBC AFAAN AMAARAAti(https://www.bbc.com/amharic/news-49218294)
Kan hiike: oroict.com
Hiikkaa keessatti yoo dogoggora qabaanne nu sirreessaa.